Famantarana tena ilaina amin'ny alika | Tontolo alika
Monica Sanchez | | curiosities, Alika ankapobeny
Indraindray dia sarotra ny mahafantatra raha marary ny volontsika, satria tsy mampiseho soritr'aretina mazava foana. Izany no antony, zava-dehibe ny fahalalana hoe inona ireo famantarana ny alika mahazatra. Azontsika atao koa ny mandray ny fepetra ilaina ary mahatonga azy ireo ho alika falifaly toy ny taloha.
Ampahafantaro anay hoe inona izy ireo.
2 Ny fon'ny olona
3 Famoahana matetika
Ny maripanan'ny alika olon-dehibe salama dia tokony ho eo anelanelan'ny 38 sy 39 degre Celsius. Mba handrefesana azy dia mila ny fanampian'ny olona iray hafa ianao, satria raha fantatrao raha manavy izy na tsia, ny zavatra atao dia ny mampiditra thermométres nohosorana teo aloha tao anaty lava, zavatra izay tsy tian'ny biby mihitsy.
Mba handroso tsara kokoa ny zava-drehetra, zava-dehibe ny fitoniana daholo ary tsy maika, raha tsy izany dia hahatsapa tsy mahazo aina kokoa ilay alika ary te handositra.
Ny fon'ny olona
Ny tahan'ny fo mifanaraka amin'ny isan'ny fitepon'ny fony isa-minitra. Azonao atao ny milaza izany amin'ny namanao raha apetranao eo amin'ny faritra ambany amin'ny ilany havia amin'ny thorax ny felatananao na, raha somary matavy loatra izy amin'ny alàlan'ny fametahana rantsan-tànana roa amin'ny feny anatiny, izay mifanena aminy ny kibo.
Rehefa voaisa ianao dia azonao atao ny mampitaha azy ireo amin'ny sanda ara-dalàna, izay:
Puppies: eo anelanelan'ny 110 sy 120 kapoka isa-minitra.
Alika olon-dehibe: eo anelanelan'ny 90 sy 100 ny fikapohana isa-minitra.
Alika antitra: eo anelanelan'ny 70 sy 80 ny fikapohana isa-minitra.
Mba hahalalanao ny tahan'ny taovam-pisefoanan'ny volonao tsy maintsy isainao ny isan'ny fotoana miakatra ny tratrany mandritra ny iray minitra. Mba hahitana azy tsara kokoa, dia ampirisihina ianao hijoro eo alohany na aoriany.
Raha ny alika salama dia izao manaraka izao:
Puppies: fofonaina 18 sy 20 isan-minitra.
Alika olon-dehibe: fofonaina 16 sy 18 isan-minitra.
Alika antitra: fofonaina 14 sy 16 isan-minitra.
Fantatrao ve hoe inona ireo mari-pamantarana tena ilaina amin'ny alika? 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Famantarana tena ilaina amin'ny alika
Io no hery manasitrana ananan'ny alika